Maxaa Soomaalida uga meel yaalla isbedellada ka muuqda Itoobiya? | Hadalsame Media
Home Maqaallada Maxaa Soomaalida uga meel yaalla isbedellada ka muuqda Itoobiya?
Maxaa Soomaalida uga meel yaalla isbedellada ka muuqda Itoobiya?
(Adis Ababa) 30 Juun 2018 – Itoobiya isbedelka ka dhacayaa wali si fiican uma cadda halka uu biya shubkiisa noqon doono , waxaase kaliya la hubaa inuu yahay isbedel wayn oo ku yimi kacdoonka Oromada iyo Amxaarada oo ah labada qawmiyadood ee dalka ugu badan .
Abiye Axmed waa nin Oromo ah , haseyeeshee , ku yimi isbahaysiga Oromoada iyo Amxaarada iyo cadaadiska reer Galbeedka dul dhigeen maamulkii Tagreega u badnaa.
Waxaa iswaydiin leh waxa uu noqon doono kaalinta gobolka Soomaalida.Hadda oo gaas laga soo saaray gobolka sidii hore maka saamayn badan doonaa mise shidaalka ayaaba noqon kara mid sabab u noqda in gobolka awoodiisa lasii wiiqo, meelaha qaarna Oromada dhul ahaan lagu soo fidiyo sidii ka dhacday Ciraaq ee Kurdida xarunta shidaalka ee Karkuuk degaan ahaan markii dame loogu qabsaday?
Waxaa muuqata in qaybo badan oo ka mida dadka Kilinka iyo kooxo siyaasadeed oo ay ku jirto ONLF doonayaan inay isbedelka uga faa’idaystaan ridista Iley oo lagu tiriyo nin aad ugu dhawaa Tagreega , qaybna ka noqday caburintii nidaamkii Tagreega u gaystay dadka Kilinka iyo Oromada .
Haseyeeshee, haddii Soomaalida kilinka ku mashquulaan Cabdi Iley iyo ridistiisa ,taasi waxay ku keeni kartaa kala qaybsanaan dhexdooda ah iyo inay u kala jabaan kuwa duurka kasoo xerooda oo doonaya in loo banneeyo maamulka gobolka iyo kuwa diyaar u noqda inay u daba maraan duurka oo iyana jabhadayn soo bilaaba, waxayna taasi sida caadiga ah kala dhantaali doonta awoodda gobolka iyo midnimada dadka , waxyna hoos u dhigi doontaa gorgortanka iyo wax la qaybsiga nidaamka cusub ee dalka ka dhashay.
Haddii Oromada iyo Amxaarada heshiis ku yihiin hogaaminta dalka shaki igagama jiro inay il yasid ah ku eegi doonaan Soomalida , una arki doonaan gobol yar oo la siiyay awoodo aanu istaahilin , ayna dhici karto in xitaa qaybsiga shidaalka ay ku dulmiyaan .
Taas waxaan u leeyahay , xaqiiqda ah in Oromada iyo Amxaarada horay loogu yiqiin cuqdad ay ka qabaan hannaanka federaalka iyaga oo u arka mid awoodo aan loo baahnayn siinaya qawmiyadaha yaryar sida Tagreega, keenina kara kala go’a dalka, waxaana jirta cabsi ah in maamulka cusub uu sameeyo wax ka badel dastuur oo meesha ka saara qodobka aaya ka talinta ama xaqa gooni isu taaga.
Soomaalida Itoobiya laba iskuma helaan , inay kala qaybsanyihiin iyo inay qayb libaax ama cad ay ku qancaan ka helaan isbedelka cusub. Waxaa xaqiiqo ah in inta arrimaha kala degayaan uu nidaamka cusubi af macaan iyo niyad wanaag kusoo dhawayn doono Soomaalida , balse , runta ay imaan doonto marka raga cusub ee dalka qabsaday ay xukunka si buuxda gacanta ugu dhigaan.
Qore: Saalim Saciid
Previous articleWAR CUSUB: DP World oo terminaal qallalan oo wayn ka dhiseeysa Itoobiya!
Next articleMadaxweynaha Soomaaliya:- “Al-qaacida iyo Daacish waxay ka daran yihiin gumeystihii Soomaaliya,”